तिथि मेरो पत्रु » चिकी चुम्बक हुन सुझाव
तपाईं आफ्नो सपना को महिला आकर्षित कसरी? यो भन्दा मान्छे परीक्षा र त्रुटिहरू भरिएको लामो समय लाग्न सक्छ जबकि, तपाईं एक केटी चुम्बक र आफ्नो भविष्य पत्नी पाउन सक्छन् त हामी सुझावहरु को एक सूची संकलित छन्.
टिप #1: अस्वीकार सधैं एक साँचो अस्वीकृति छैन
तपाईं एक सुन्दर स्त्री पूरा मानौं, त्यो एक प्रेमी छ तपाईं पत्ता त्यसपछि कुराकानी माथि प्रहार. सबै भन्दा मान्छे चिन्ह रूपमा हुनेछ गर्दा अर्कोतिरबाट र छोड्ने, तपाईं वास्तवमा हुँदैन. यो अस्वीकृति चिह्न होइन न त यो त्यो चासो छैन भनेर एक सूचक हो. कुराकानी हंसते र मुस्कान संग सजिलै संग बग्ने भने, आफ्नो संकेत रूपमा ती लिन. साँच्चै महिलाहरु आकर्षित गर्ने कला महारत छ जो एक मानिस साँचो छ र त्यो उनको देखेपछि एक असल महिलाहरु थाह. बस त्यो वर्तमान छ किनभने उपलब्ध तपाईं एक मौका छ कहिल्यै भन्ने होइन. यो उनको लागि त्यहाँ हुन आफ्नो मौका छ. सबै भन्दा राम्रो सम्बन्ध र विवाह को केही मित्रता माध्यम सुरु.
टिप #2: बाहिर खडा
भीड देखि बाहिर उभिरहेका डेटिङ दृश्य मा महत्वपूर्ण छ. एउटै कुरा भन्नुको र तपाईं जस्तै तरिका प्रेमलीला धेरै मान्छे छन्. त्यसैले तपाईं बाहिर खडा गर्छन् कसरी? विश्वस्त रूपमा पार गरेर आउनुहोस्, गुस्ताख छैन. साँचो हुन र स्वार्थबाट सोख पत्ता तपाईं दुवै भाग हो कि. अनि अन्त, आफैलाई विशिष्ट हुन. यो हुन अर्थ छ भने, तिमी जा सही महिला आकर्षित गर्नेछ.
टिप #3: एक जडान बनाउन
उनको विचार र विकल्प को सबै सहमत संग एक महिला मुखबाट आउने सबै सहमत एक महिला जीत बाटो छैन. महिला कहिल्यै उनी भन्छिन् सबै संग सहमत मानिस खोज्दै हुनुहुन्छ. हामी एक चुनौती. फरक-फरक दृष्टिकोण बहस, राय, गतिविधिलाई, र भावनाहरु एक गहिरो सम्बन्ध फारम मदत गर्छ. एक महिलाले मानिस संग इमानदार जडान खोज्दैछ.
टिप #4: बल
महिला बलियो छ र दुवै भावनात्मक र मानसिक एक उच्च स्थान छ जो एक जोडीलाई लागि प्रयास. तिनीहरूले पैसा छैन किनभने तिनीहरूले एक महिला को आकर्षित गर्न सक्दैन भने केही मान्छे महसुस गर्दा, एक ठूलो काम, वा उच्च सामाजिक स्थिति, त्यो सत्य होइन. महिला बलियो चरित्र मानिस आकर्षित हुन्छन् र जसले चाहन्छ थाह. तर यो शक्ति misconstrue छैन. साँचो बल धारण गर्ने मानिस लागि आफ्नो संवेदनशील र रोमान्टिक पक्ष देखाउन डर छैन.
टिप #5: सम्झौता बन्द
सबैभन्दा मानिसहरू सम्झौता बन्द गर्न कसरी थाहा छैन रूपमा मित्र क्षेत्र फस्न. सम्झौता सील बिना, तपाईं चाँडै हेरविचार र प्रेम मान्छे साथी गरिनेछ, र दुर्भाग्य यो स्थिति छुटकारा पाउन गाह्रो हुनेछ. मान्छे ट्रयाक पक्ष प्राप्त र तिनीहरूले के थाहा छैन नभएकोले एक महिला तिनीहरूको बनाउन सही मौका छुट्न सक्छ. प्रमुख लक्षण मा मा zeroing संग अलि आक्रामक हुनु एक महिला तिमीलाई सम्झौता बन्द गर्न मदत गर्नेछ पठाउँछन्.
माथि सुझाव माहिर गरेर, तपाईं पक्कै आफ्नो सपना को महिला आकर्षित गर्न आफ्नो बाटो मा हुनेछ.
5 तरिका टेक खाँचोमा नहुन
कसरी लामो दूरी दूरी सम्बन्ध बनाउने काम